မြင့်မားသောပါဝါ Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီးမီးသီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောပါဝါ Led လမ်းမီး,Led လမ်းမီး,Led လမ်းမီးမီးသီး,Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လမ်းမီးစီးရီး > အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီး
အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြင့်မားသောပါဝါ Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Led လမ်းမီးမီးသီး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
light LED ၏အကြီးမားဆုံးသောလက္ခဏာမှာ directional transmitting light ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ power LED အားလုံးနီးပါးသည် riflors များတပ်ဆင်ထားကြပြီးထိုကဲ့သို့သော reflector များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် lamp များထက်မြင့်သည်။ ထို့အပြင် LED...
ဤလမ်းမီးလုံးကိုလမ်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လမ်းမီးခွက်များရှိသဖြင့်ကိုက်ညီသောမီးချောင်းများနှင့်မတူပါ။ ဤကဲ့သို့သော lamp lamp ၏ဒီဇိုင်းသည်အထူးကောင်းမွန်သည်၊ lamp...
မြို့လမ်းမီးအတွက်အသုံးပြုသောလမ်းမီးများအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်သည်များသောအားဖြင့် LED (သို့) ဆိုဒီယမ်မီးခွက်ဖြစ်ပြီးအသွင်အပြင်သည်အလွန်လှပသည်။ ဝယ်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းသဘောတရားအရဖြစ်သည်။...
ကျေးလက်လမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်၊ ပြည်သူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလူနေမှုအခြေအနေများကိုပံ့ပိုးရန်ခေတ်မီစေရန်ကျေးလက်လမ်းမီးခွက်များကိုတိုင်းပြည်လမ်း၊ အထူးသဖြင့်လမ်းမီးခွက်များနှင့်မီးအိမ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊...
အခုဆိုရင်လမ်းအလင်းရောင်လမ်းဆီမီးခွက်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ဒါပေမယ့်လည်းလှပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများလိုက်စားအတွက် ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနား, လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြလမ်းအလင်းရောင်အတွက်,...
လမ်းမကြီးအလင်းရောင်လမ်းမီးခွက်များစွာကိုမျိုး, ဒါပေါ်မှာ Single-လက်မောင်းလမ်းမီးခွက်, ကို double-လက်မောင်းလမ်းမီးခွက်, Self-ကွေးသောလက်ရုံးတော်လမ်းမီးခွက်နှင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။...
ဒီထုတ်ကုန်လှပသောဒီဂရီ, အသွင်အပြင်ကနေသို့မဟုတ်အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေး မှစ. , အသုံးပြုသူရဲ့မေတ္တာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိမရှိ, တစ်ခုတည်းလက်မောင်းလမ်းဆီမီးခွက်ကို အသုံးပြု. အလွန်ကောင်းသောအဆင်ပြေစေရန်,...
လမ်းမီးခွက်သည်ဦးခေါင်း၏ဤကြင်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သော LED ကိုလမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်း၏အလားတူထုတ်ကုန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။...
graphene, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ optical, လျှပ်စစ်, စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Micro-nano အပြောင်းအလဲနဲ့, စွမ်းအင်, ဇီဝဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဝေအရေးကြီးသောလျှောက်လွှာအလားအလာရှိပါတယ်, အနာဂတ်တော်လှန်ရေးသမားပစ္စည်း graphene...
graphene module ကိုယခု module တစ်ခုအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါသည်, graphene SP အတွက်ကာဗွန်အက်တမ်၏ရေးစပ်သောရိုးရာလူမီနီယံရဲ့ module တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Two-ရှုထောင်ကာဗွန် nano ပစ္စည်းများအတွက်စပ် Orbital ဆဋ္ဌဂံပျားလပို့ကိုရာဇမတ်ကွက်သည်,...
အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းအဖြစ်လမ်းဆီမီးခွက်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန် LED ကြောင့်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးရိုးရာလမ်းအလင်းရောင်ထက်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော, တောက်ပထိရောက်မှုရှည်လျားသောဘဝမြင့်မားဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျ,...
တတိယမျိုးဆက်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောအမြင့်ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျ, သာ 1960 ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျကိုအမြင့်ဆုံးတောက်ပထိရောက်မှု, ရှည်သောအသက်, လက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်မထောင်ချောက်အရောင်,...
ဒီခေတ်ထဲမှာ, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထုတ်လွှတ်လျှော့ချရေးပြင်းပြင်းထန်ထန်နိုင်ငံတိုင်းတို့ကထောက်ခံကြသည်။ ပြင်ပအလင်းရောင်၏လယ်ပြင်တွင်, စွမ်းအင်ချွေတာအလင်းရောင်မီးခွက်၏သုတေသနနှင့်အသုံးပြုမှုကိုလည်းဆက်လက်နေကြသည်။...
ဤရွေ့ကားမြင့်မားတဲ့ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်ကျယ်ပြန့်လမ်းများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, လေဆိပ်, wharves, သင်္ဘောကျင်း, ဘူတာရုံ, ရင်ပြင်, လမ်းလမ်းဆုံ, စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ, ပန်းခြံများ, ဝင်းအလင်းရောင်နှင့်စက်ရုံစိုက်ပျိုးမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။...
လမ်းမီးစီးရီး, လမ်းမီး, လမ်းမီး Decoration, လမ်းမီးစာအုပ် မြင့်မားသောပါဝါ Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီးမီးသီး, Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း 1.There ကနေရှေးခယျြဖို့အရောင်များကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် 2.The ဆီမီးခွက်မြို့ပြအဓိကလမ်း,...
LED လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက် power supply system ကိုလည်းအစဉ်အလာအလင်းအရင်းအမြစ်မှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ drive ကိုပါဝါသဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် LED, ကြီးမားတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်မကြာခဏတစ်ဦးနဲ့ LED device ကို switch ကို power supply...
သမားရိုးကျလမ်းမီးခွက်ကိုကိုင်လမ်းဆီမီးခွက် LED, ထို LED အလင်းအရင်းအမြစ်, Gan ပါဝါအမျိုးအစားဒြပ်ထိရောက်မှုအဖြူရောင်အလင်းဖြင့်အနိမ့်ဗို့အား DC power supply ချမှတ်အပြာရောင်အလင်း LEDs နှင့်အဝါရောင်, ထိရောက်လုံခြုံ, စွမ်းအင်ချွေတာ,...
တရုတ်နိုင်ငံ အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီး ပေးသွင်း
high-ပါဝါ LED လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်, ကျယ်ပြန့်က၎င်း၏ရေတိုင်ကီ၏လမ်းအလင်းရောင် project.The လူမီနီယံအလွိုင်းမျက်နှာပြင်များတွင်အသုံးပြုခေတ်ရေစီးကြောင်းအလင်းအရင်းအမြစ် configuration ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကြမ်းတမ်း environment.In များအပြင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်နက်ရှိုင်းသော anodic ဓာတ်တိုး, နဲ့ကုသတာဖြစ်ပါတယ်၎င်း၏မူပိုင်ခွင့်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ပါသည် သဘာဝအ convection အပူလွန်ကျူးတည်ဆောက်ပုံ, မြင့်မားသောအပူလွန်ကျူးထိရောက်မှု, အသေးစားအသံအတိုးအကျယ်, အလင်းအလေးချိန်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကအရည်အသွေးမြင့်ရှည်သောအသက်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ LED ကိုအသုံးပြုသည်, အလင်းဖြတ်သန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကို LED ။
မြင့်မားသောပါဝါ Led လမ်းမီး Led လမ်းမီး Led လမ်းမီးမီးသီး Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း ရှည်လျားသောဘဝကို LED လမ်းမီး